Fiainam-pikambanana: Amperinasa ny birao vaovaon’ny Fizalaotra
lundi, 11 juin 2018 11:06
Sary Gasypatriote Ambatondrazaka
Tafajoro soa aman-tsara ny tapa-bolana lasa teo ny birao vaovaon’ny Fikambanan’ny Zanaka Ampielezana Terak’Alaotra (FIZALAOTRA). Ny Jeneraly misotro ronono Rabearivony Justin, terak’Imerimandroso, no mitarika azy.
Nampahafantarina omaly tolakandro nandritra ny fivoriana voalohany tao Antananarivo ireo mpiara-miasa akaiky. Nambara nandritra io fotoana io ihany koa ireo fanamby goavana hotanterahina ato ho ato. Anisan’ireny ny fanisana ny mpikambana, ny fitsidihana ireo vato nasondrotry ny tany terak’Antsihanaka miasa sy monina ao an-drenivohitra, ny hetsika fitadiavam-bola ary ny fanomanana ny fankalazana ny faha-40 taona nijoroan’ny fikambanana amin’ny 2019.
Roa taona ny fe-potoana hiasan’ny birao vaovao. Manentana ny terak’Alaotra mba hanatevin-daharana ho fampiroboroboana ny fikambanana ny Filohany Rabearivony Justin. Fifanasoavana, fifanotronana ary firaisankina no tanjona. Eo ihany koa ny fandraisan’anjara mivantana amin’ny fampandrosoana ny Faritra niaviana.
Avy amin’ny Distrikan’Ambatondrazaka sy Amparafaravola ary Andilamena ireo mpikambana ao amin’ny FIZALAOTRA. Mpikambana feno ao ihany koa ireo zanam-pikambanana avy any amin’ireo vakim-pileovana miisa telo ireo.